Okporo ụzọ akara agba mwepu Manufacturers | China Road Marking Agba Mwepụ Factory & Suppliers
Obodo Shangdang nke Dantu District, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China Mob / Whatsapp: +86 15862991398
Thermoplastic Road akara Machine
Oyi Agba Agba Spraying Road akara Machine
Self-Propelled Thermoplastic jijiji Line Ime Machine
Thermoplastic Agba Preheater
Abụọ akụrụngwa Road akara Machine
Okporo ụzọ Marking Inyeaka Equipment
Road Marking Agba Mwepụ
Agba akara Road
—— Mwepu Agba Agba Mgbapụ——
Eziokwu ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ị nwere nkọwa ma ọ bụ ntụnye ọ bụla, biko pịa bọtịnụ dị n'okpuru iji chọta bọọdụ ozi ahụ ma hapụ anyị ozi
Kpọtụrụ Persion: James Zhang
Ìgwè: +86 15862991398
LXD260C akpaka gwongworo nọkwasịrị n'ịnyịnya Ultrahigh Nsogbu Mmiri Jetting Agba / Mwepụ Mwepụ
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke Road Marking Agba mwepụ / Rubber mwepụ. Achọrọ ụgbọala, Dị ka ihe atụ: truckgbọ mmiri Jac, K5L cab ， Engine: Yuchai, YC4S160-50, Gearbox: ngwa ngwa, 6DS60T, ihu ihu ihu: 3.5T, axle azụ: 8T, crossbeam: 230 * 75 * 6 ， taya: 10R22 .5, agụụ tire。carriage akụkụ: 6800 * 2450 * 600 ， nnukwu uka: 16T, ikike ibu: 9.8T
LXD900 Okporo Markzọ Ntinye Aka
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke n'okporo ụzọ marking wepu. LXD900 akara akara ihe nhichapụ a na-ejikarị ewepụ ahịrị agba oyi. Ihe batara Tupungato ígwè cutter isi siri ike ma na-agbagharị ngwa ngwa. Isi cutter nwere ogologo ndụ ndụ, ọ na-adaba adaba ibu ya na ibutu ya.
LXD1050 Okporo Markzọ Ntinye Aka
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke n'okporo ụzọ marking wepu. Engine: 11.0HP (aka na-amalite ikuku ikuku mmanụ ikuku anọ); Oru oru: gbanwee dika onodu uzo elu uzo, dika ihe kariri 3mm.
LXD260B Ultrahigh Nsogbu Mmiri na-agba agba n'okporo ụzọ na-ewepu ya na sistemụ mmịpụta
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke ultrahigh-mgbali ọgbụgba ọkụ ụzọ n'okporo ụzọ marking iwepụ na a mmiri usoro. LXD260B ihe na-eme ka mmiri na-agbapụ mmiri na-eme ka iwepụ usoro nnabata na-ebubata na Germany, nke nwere ụdị Jetstream 260 Series ụdị ụdị ọkụ ọkụ nke sitere na America.
LXD90-3B High Pressure Water ọgbụgba ọkụ Road Marking Mwepụ Na mmiri System
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke elu-nsogbu mmiri ọgbụgba ọkụ ụzọ marking iwepụ na a mmiri usoro. Ọ nwere ike wepu akara akara n'okporo ụzọ na-enweghị mbibi okporo ụzọ ahụ, mmiri mmiri na mkpofu nwere ike ịmịnye n'ime mmiri mmiri na-ekpofu mmiri, Mmiri mmiri mmiri ahụ nwere ike ịnabata ihe ruru 700kg mmiri mmiri (ikike ọzọ na arịrịọ).
LXD90-3A High Pressure Water ọgbụgba ọkụ Road Marking iwepụ
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke elu-nsogbu mmiri ọgbụgba ọkụ ụzọ marking mwepụ. A na-eji ya maka iwepu ụdị ahịrị ụzọ dị iche iche na mmiri ya nwere nrụgide dị elu. Ọ nwere uru nke ịrụ ọrụ dị mfe, ndozi dị mfe, arụmọrụ dị elu, na-enweghị mbibi okporo ụzọ, gburugburu ebe obibi.
LXD D-390 Thermoplastic Thezọ Ntinye Mwepụ
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke thermoplastic ụzọ marking iwepụ. Ọ bụ ọkachamara na akụrụngwa na ọtụtụ-eji wepụ okporo ụzọ akara e. Igwe ahụ nwere uru nke ike siri ike, nnukwu ọsọ, ọrụ dị mfe na nchebe, obere mkpatụ, mkpọtụ na uzuzu, wdg.
Jiangsu Luxinda Traffic Facilities Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ sayensị na teknụzụ nke na-etinye aka n'okporo ụzọ ọkachamara na-enyocha nyocha na mmepe, imewe, mmepụta na ahịa. Ọ dị n'ụkwụ Runyang Yangtze River Highway Bridge, okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, na ụgbọ mmiri na-agagharị ...
 Kpọtụrụ Persion: James Zhang
 Ìgwè: +86 15862991398
Copyright © Jiangsu Luxinda Okporo ụzọ ụlọ ọrụ Co., Ltd. Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap